Fikarohana momba ny firaisana Chance the Rapper as the Reincarnation of Louis Armstrong: Compositions mozika krismasy mandritra ny androm-piainana roa - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Louis Armstrong sy “Krismasy Mahafinaritra”
Louis Armstrong dia mpamoron-kira malaza, mpandahatra feo miaraka amina feon-trompetra sy trompetra izay naharitra 50 taona ny asany. Teraka tamin'ny 1901 tany New Orleans izy ary mpisava lalana jazz. Ny mahaliana dia nanoratra izy ary nanao kilalao Krismasy:
Krismasy mahafinaritra izaitsizy (1997)
Chance the Rapper and his “Merry Christmas Lil 'Mama”
Afaka ny rapper Teraka tany Chicago tamin'ny taona 1993. Mpihira, mpamoron-kira, mpitolona ary mpanao asa soa izy.
Tamin'ny Desambra 2020, Chance the Rapper dia namorona hetsika fialantsasatra virtoaly mitondra ny lohateny hoe: Merry Noely Lil 'Mama: Ilay fanomezana tsy mitsahatra manome.
Famaritana ara-batana amin'ny tranga Reincarnaton: Chance the Rapper dia manana endrika mampiavaka azy izay mitovy amin'ny an'i Louis Armstrong. Misy ihany koa ny famoahana hafaliana hafahafa amin'ny endrik'izy ireo.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Misongadina ao amin'i Chance the Rapper ny talentan'i Louis Armstrong